ပေါ့ပေါ့ဆဆ အတွေး (၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ပေါ့ပေါ့ဆဆ အတွေး (၁)
ပေါ့ပေါ့ဆဆ အတွေး (၁)
Posted by moethidasoe on Jul 8, 2011 in Creative Writing, Short Story | 24 comments
ကွမ်းယာဆိုင်ကုထုံး ခွေးရူး ပေါ့ပေါ့ဆဆ နှစ်လုံး
ဒီနေ့ ထိခိုက်ရှနာ လူနာတွေ များလှတယ် .. ဟော ရောက်လာပြန်ပြီ
“ဆရာမရေ .. ဒီကလေးကို အရင်ကြည့်ပေးပါဦး”
မျက်နှာ ဘယ်ဘက်အခြမ်းရယ် .. ဘယ်ဘက်လက်မောင်းရယ် .. ဘယ်ဘက် ပေါင်ရယ် စုတ်ပြတ်ဒဏ်ရာတွေ ဗလပွနဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ရွယ် ကလေးတစ်ယောက် ကို နောက်တော်ပါ အခြံအရံအပြည့်နဲ့ ၀င်လာပါတယ်
ခွေးကိုက်ခံရပြီဆိုရင် တချို့က ခွေးရူးပြန် ကာကွယ်ဆေး တခါတည်း ထိုးခိုင်းကြတယ် .. တချို့က ခွေးကို စောင့်ကြည့်ပြီးမှ ထိုးခိုင်းကြတယ် .. စောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့တော့ လိုတာပေါ့ .. ကျမကတော့ .. လူနာပေါ် လိုက်ပြီး အကြံပေးရတာပေါ့ .. အဆင်ပြေသလို လုပ်လို့ ရအောင်ပေါ့ ..
ခွေးရူး သေချာရင်တော့ ချက်ချင်းဆေးထိုးခိုင်းရမှာပေါ့ .. တခါတလေ ခရီးသွားတုန်း အကိုက်ခံရတယ် .. ဒါမှမဟုတ် ခွေးကို စောင့်ကြည့်ဖို့ အဆင်မပြေရင်တော့ ထိုးထားတာ အကောင်းဆုံးလို့ အကြံပေး တိုက်တွန်းရပါတယ် .. ငွေကြေးလဲ အဆင်ပြေတယ် .. ဆေးလဲ ထိုးချင်တယ် ဆိုရင် တခါတည်း ထိုးဖို့ ပြောပါတယ် ..
ငွေကြေး အဆင်ပြေပေမယ့် မထိုးချင်တဲ့ လူရယ် ဒါမှမဟုတ် ငွေကြေး မပြည့်စုံသူအတွက်တော့ ခွေးကို စောင့်ကြည့်စေတဲ့ နည်းလမ်းကို ပြောပြပါတယ် .. ခွေးကို စောင့်မကြည့်နိုင်ရင်တော့ ဆေးထိုးတာအကောင်းဆုံး ဆိုတာလဲ ပြောပြရတယ် ..
ကလေးအမေက ပြောတယ် ခွေးက အိမ်နားက ခွေးပါ .. ကလေးတွေ သိပ် ဆော့တော့ မျက်စိနောက်ပြီး ကိုက်တာ နေမှာ တဲ့
“ဒီမယ် ကလေးအမေ .. အခု အကိုက်ခံရတာက မျက်နှာဖြစ်နေတယ် .. ဒီတော့ စိတ်ချရအောင် ဆေးထိုးထားဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ .. ထိုးဖြစ်အောင် ထိုးပါနော် .. တခြားနေရာဆိုရင် စောင့်ကြည့်ပြီး ထိုးဆိုရင် ဖြစ်နိုင်သေးတယ် .. မျက်နှာ ဆိုတာ ဦးနှောက်နဲ့ အနီးဆုံးနေရာ ဆိုတော့ ဖြစ်ချင်းဖြစ်ရင် သူများထက် စောစောစီးစီး ရောဂါဖြစ်တတ်တယ် .. မတတ်နိုင်သေးလို့ ဆေးမထိုးချင်သေးရင် .. ခွေးကို သေသေချာချာ စောင့်ကြည့်ပါ .. ခွေးက ကိုယ့်မျက်စိအောက်မှာ မရှိတော့ရင် .. သေသွားရင် .. သူများ ရိုက်သတ်လိုက်ရင် .. ဘယ်နည်းနဲ့ သေသေ ဆေးထိုးကိုထိုးရမယ် ဆိုတာ မှတ်ထားနော် ..
နောက် နှစ်လလောက် ကြာတဲ့အခါ သတင်းတခု ကြားလိုက်ရတယ် ..
“ဆရာမ ကြားပြီးပြီလား .. ဟိုတခါ မျက်နှာမှာ ခွေးကိုက်ခံရတဲ့ ကလေးလေ .. အခု ခွေးရူးပြန်ပြီး သေသွားပြီ”
“အလို ဘယ်လိုဖြစ်ရပါလိမ့် .. ခွေးကို သေသေချာချာ စောင့်မကြည့်ကြလို့လား .. ခွေးရူးပြီး သေသွားတာတောင်မှ ဆေးထိုးရင် မီသေးတာ .. အသေအချာ မှာလိုက်ရဲ့ သားနဲ့”
ဖြစ်ပုံက ဒီလို .. ဆေးခန်းက အပြန်မှာ ကလေးကို သနားကြတဲ့ အနီးနားက တတ်နိုင်သူတွေက ဆေးထိုးဖို့ ဆေးဖိုးတွေ စုပြီး ပေးလိုက်တယ် .. နောက်ပြီး စိတ်မထိန်းနိုင်ကြတဲ့ လူတွေကလဲ ခွေးကို ရိုက်သတ်လိုက်ကြတယ် .. သူတို့ အတွေးတွေထဲမှာ ခွေးသေသွားရင် မရူးတော့ဖူးလို့များ ထင်နေကြသလားတော့ မသိဘူးပေါ့ .. ဘယ်လိုကြောင့် ခွေး သေသေ .. ပျောက်သွားပျောက်သွား ဆေး ထိုးဖြစ်အောင်ထိုးဖို့ မှာထားလျက်နဲ့ .. အရေးကြီးတာမှ မေ့သွားကြတယ်နော် .. ရထားတဲ့ဆေးဖိုးတွေက ဈေးဖိုးဖြစ်သွားသလား .. နှစ်လုံးဖိုး ဖြစ်သွားသလားတော့ မသိတော့ပါ .. အနာတွေကို ဟိုဆေးထည့် ဒီဆေးထည့်နဲ့ အပေါ်ယံတော့ ပျောက်သွားရော .. ဟော နှစ်လလောက် ကြာတော့ ကလေးက ဖျားလာတယ် .. ထုံးစံအတိုင်း .. ကွမ်းယာဆိုင်ကုထုံးနဲ့ ကုကြပြန်ရော .. ) ဆေးဖိုး မတတ်တာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် .. နောက်တော့ ကလေးက အကြောဆွဲလာ .. ရေသောက်လို့ မရဖြစ်လာတော့မှ ဆေးရုံကြီးသွားတော့ လွန်သွားပြီလို့ ပြောလိုက်တယ် .. ဒါနဲ့ ကလေးကို အိမ်ပြန်ခေါ်လာတော့ ကလေးက သတိ မလွတ်ခင်မှာ ပြောသွားသေးတယ် ..
အမေ သားကို ဆေးမထိုးပေးလို့ သား ခွေးရူးပြန်ပြီး သေရတော့မယ် တဲ့
နောက်တနေ့မှာ ကလေး ဆုံးသွားတယ် တဲ့ .. သြော် သေသေချာချာ မှာထားလျက်နဲ့ ပေါ့ပေါ့ဆဆ တွေးလိုက်တာ .. အသက်တချောင်း ….
၂၀၀၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာမှာ ရေးဖြစ်ခဲ့တယ်
သိချင်တာလေး မေးခွင့်ပြုပါ ကျွန်တော့်အသိ ဆရာမတစ်ယောက် ခွေးကိုက်ခံရတယ် ကျန်းမာရေးအသိရှိတဲ့အတွက် ကာကွယ်ဆေးချက်ချင်းထိုးတယ်(စောင့်တောင်မကြည့်တော့ဘူး) ဒါပေမဲ့ သိပ်မကြာဘူး ခွေးရူးရောဂါနဲ့ပဲ သေသွားတယ် ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်လဲ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဆေးထိုးလဲ သေတာပါပဲ ဆိုတဲ့အတွေးဝင်လာကြတယ် ဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲ မသိဘူး
ဒေါက်တာရေ …လူတွေ ခေတ်နောက်ကျ ကျန်ခဲ့တာ ခွေးကိုက်လျှင် ချက်ပတ်လည် ဆေး ဆယ့်လေးလုံးပြည့်အောင် ထိုးရတယ် ဆိုတဲ့ အသိပဲ သိကြတယ် …
ကျွန်မ တစ်ခါ ခွေးကိုက်ခံရဖူးတယ် .. လမ်းဘေးကခွေးဆိုတော့ ကြောက်တာနဲ့ ကာကွယ်ဆေးထိုးလိုက်ပါတယ် … လက်မောင်းမှာထိုးရတဲ့ဆေးပါ … အဲဒီတုန်းက တစ်သောင်းလောက်ပေးရတယ် … သိပ်မနာဘူး …
ချက်ပတ်လည်မှာ ထိုးတဲ့ ဆေးက မြန်မာနိုင်ငံဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံက ထုတ်တာ ..
လူကြီးဆိုရင် တခါထိုး ၂ စီစီ .. ၁၄ ရက် မပျက်မကွက်ထိုး .. ပုလင်း သုံးလုံး ရောင်းပေးမယ် .. စုစုပေါင်း ၂၀၀၀ လား ၃၀၀၀ လား ကုန်မယ် .. (ဒါက ဆေးဘိုး) .. ဆေးထိုးခ မပါသေးဘူး .. ဆေးတွေကို ရေခဲနဲ့ ထားရတယ် .. အအေး မပြတ်ဖို့ လူနာက တာဝန်ယူရတယ်
လက်မောင်း .. တင်ပါးမှာ ထိုးရတဲ့ ဆေး က ကုမ်ပဏီတွေက သွင်းတယ် .. အနည်းဆုံး ၄လုံးက ၅ လုံးအထိ ထိုးရတယ် .. သူ့ ရက်ပတ်နဲ့ ထိုးရတယ် .. ပြည့်အောင် ထိုးမှ အာနိသင်ရမှာ
တချို့ ဆေးအရောင်းဆိုင်တွေမှာ ၂ လုံးထဲ ထိုးလို့ ရတယ် ဆိုပြီး ရောင်းနေတယ်လို့ ကြားရတယ် .. အဲဒီလို ဖြစ်ရတာက အခု ဆေးတစ်လုံးကို ၁၅၀၀၀ လောက်ကျတယ် .. ၅ လုံး ဆိုတော့ ၇၅၀၀၀ လောက် ကျတယ် .. လူနာက ဗိုက်မှာလဲ အထိုးမခံချင် .. ပိုက်ဆံကလဲ မတတ်နိုင် .. ဆေးဆိုင်ကလဲ ရောင်းချင်တော့ .. ၂ လုံး ထိုးရင် လုံလောက်တယ် လို့ ပြောကြတာ ယုံပြီး ၂ လုံးထဲနဲ့ ရပ်လိုက်ရင် ဆေးထိုးတာ နာတာပဲ အဖတ်တင်မယ် အာနိသင် အပြည့်မရလို့ သေတာ ဖြစ်မယ် ..
ဒါကြောင့် သိတဲ့ ဆေးကုမ်ပဏီတွေကို မေးကြည့်တယ် .. မင်းတို့ ဆေးတွေမှာ ၂ လုံးထဲ ထိုးလို့ ရသလား ဆိုတော့ မရဘူး လို့ ပြောတယ် .. ဒါကြောင့် မင်းတို့လဲ အရောင်းဆိုင်တွေမှာ ပြန်ပြောကြဦးလို့ မှာမိတယ် .. nozomi ရဲ့ ပြဿနာက အဲဒီလို ဖြစ်ဖို့ များတယ် ..
ဒါဆို ၁သိန်းလောက် မရှိရင် အဲဒီ ဆေးမျိုး ထိုးလို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။
ချက်ပတ်လည် ဆေးဆိုရင် ဆေးထိုးခ ပါ အပြီး ဘယ်လောက် ကျနိုင်မလဲ မှန်းချေလေး ပြောပြပေးပါ သိချင်လို့ပါ။
တစ်သိန်းလောက် မကုန်ပါဘူး … ၃ သောင်းကျော်လောက်တော့ကုန်မယ် … ဖြစ်ဖြစ်ချင်း လက်မောင်းနှစ်ဖက်ကို နှစ်လုံးထိုးရတယ် … နောက်တစ်ပတ်လောက်နေတော့ တစ်လုံးထပ်ထိုးရတယ် .. နောက်တစ်ပတ်နေတော့ နောက်တစ်လုံး .. စုစုပေါင်း ၄ လုံး ..
ဆေးထိုးခါနီးမှ ကုမ္ပဏီကို ဖုန်းဆက်မှာလိုက်ပြီး သူတို့လာပို့ပေးတယ် …
ဆေးထိုးခံရတာ သိပ်မနာပေမယ့် ဆေးရှိန်နဲ့ လူကတော့ နုံးသွားတယ် …
အဲဒီလိုကာကွယ်ဆေးကို အပြည့်ထိုးထားရင် အချိန်ဘယ်လောက်ထိကာကွယ်ပေးနိုင်လဲ
(ဥပမာ.. နောက် တနှစ်အတွင်း မတော်တဆ ခွေးထပ်အကိုက်ခံရရင် ထပ်ထိုးဘို့မလိုဘူး ဆိုတာမျိုးပေါ့)
encyclopedia မှာ တက်ဖတ်ကြည့်တော့ .. ကိုက်ပြီး ဆယ်ရက်အတွင်း ထိုးသင့်တယ် ..
တကြိမ် ဆေးထိုးပြီးတာတောင်မှ နောက်တခါ ထပ်ကိုက်ရင် ၂ လုံးထပ်ထိုးရမယ် (ဒါက ကုမ်ပဏီဆေးနော် .. ၁၄ လုံးဆေး မဟုတ်ဘူး) ဒါကြောင့် ကျောက် ကာကွယ်ဆေးလို .. တသက်လုံးတော့ မကာကွယ်ပါဘူး တဲ့ .. ဘယ်နှနှစ် တစ်ကြိမ်လဲ ဆိုတာကို လိုက်ဖတ်တာ မတွေ့သေးဘူး ..
အခုဗိုက်ကို မထိုးလည်း ရပြီဆိုတော့ လေးဖက် ခွေးကိုက်ခံရမှာ မကြောက်နဲ့တော့နော်
အီးတုံးလေး ဘာတွေစဉ်းစားနေတာလဲ ကြောက်တာက ကိုပေါက်ကြီးလေ..:)
ကျနော်လည်း ငယ်ငယ်က အကိုက်ခံရဖူးတယ်။ သားမွေးပြီးကာစ ခွေးမကြီးမျက်စိနောက်အောင် သွားနေမိလို့။ ချက်ပတ်လည် ၁၄လုံးလားမသိဘူး ထိုးရတယ်။ မနာအောင် ရေခဲအုပ်ပြီးထိုးပေးရလို ဆေးခန်းက ဆရာမတွေက မောင်ရေခဲလို့ ခေါ်တယ်။ ခွေးကိုက်ခံရပြီးခါစ ဆေးထည့်ထားလို့ နာပေမယ့် ကျောင်းမတက်ရလို့ ပျော်ခဲ့မိသေးတယ်။
ဒီလိုကျန်းမာရေး ပညာပေးပို့စ်လေးတင်ပေးတဲ့ မမိုးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မေးပါရစေနော်။ ကိုက်တဲ့ခွေးက မရူးခင်သေသွားလည်း စိတ်မချရဘူးပေါ့နော်။ ခွေးကမသေသေးရင် သေတဲ့အထိစောင့်ကြည့်ရမှာလားဟင်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့ ခွေးဆိုရင်ကော ကိုက်ခံရတဲ့သူကို ဆေးထပ်ထိုးဖို့လိုသေးလား။
ကိုက်တဲ့ခွေး ဆယ်ရက်အတွင်း ဘယ်နည်းနဲ့ သေသေ (ကားတိုက်၊ လူရိုက်၊ အဆိပ်မိ၊ ရူး) .. ဒါမှ မဟုတ် စောင့်ကြည့်တဲ့ မျက်စိအောက်မှာ မရှိတော့ရင် (ပျောက်သွားရင် .. အခြားရပ်ကွက်ကို ရောက်သွားရင် .. ထွက်ပြေးသွားရင်)လဲ ဆေးထိုးရမှာ .. ခွေးကို ဆေးထိုးထားတယ် ဆိုရင်လဲ ဘယ်တုန်းက ထိုးထားတာလဲ ဆိုတာ သိဖို့ လိုလိမ့်မယ် ထင်တယ် .. လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်လောက်က ထိုးထားတာကို ထိုးထားတယ် လို့ ပြောရင် စိတ်ချရပါ့မလား ဆိုတာကိုတော့ တိမွေးကုဆရာဝန်တွေပဲ ရှင်းပြနိုင်လိမ့်မယ် ထင်တယ်
အဲဂလိုဆို လမ်းဘေးက ခွေးလေခွေးလွင့်တွေ အကုန်ရှင်းထား…။ ခွေးမွေးချင်ရင် လိုင်စင်လုပ်…။ အဲဒါဆိုရင်….. ခွေးကိုက်ခံရတာလည်း လျော့နည်းသွားမှာပါ..။ 22 ရာစု လောက်ရောက်ရင်ဖြစ်ကောင်းပါရဲ့……..
comment တွေမှာ လိုက်နီနေတာ ဘာကြောင့်ပါလိမ့် .. သူတို့ မေးတာတွေက မေးသင့်မေးထိုက်တာ .. comment ပေးတာတွေကလဲ အကောင်းတွေပဲ ..
အဲဒီအလကားနေ ဘာအတွေးအခေါ်မှ စိတ်ထဲမထားပဲ အစိမ်းပြပြ..အနီပြပြ….ပွိုင့်အမှတ်တော့ လျှော့မှနဲ့တူတယ်နော..။
ကောင်းတယ် သူကြီး အယူအဆတစ်ခုကို မကြိုက်လို့ သဘောမတူလို့ အနုတ်ပေးရင် တော်သေးတယ် တချို့ပို့စ် မှာ အသားလွတ် လက်သရမ်းနေတာတွေ ကို တစ်ခုခုလုပ်သင့်ပါတယ်
ကျွန်မမောင်လေး နယ်ပြန်တုန်းက ခွေးကိုက်ခံရဖူးတယ်
မောင်လေးလည်း ခုထိတော့ ဘာမှမဖြစ်ဘူး
အဲတုန်းက ကာကွယ်ဆေးထိုးဖြစ်လားလဲ မသိဘူး (ကျွန်မလည်း ငယ်သေးတယ်)
ခုတော့ စိုးရိမ်စရာမရှိတော့ဘူးထင်ပါတယ် (ဆေးထိုးခဲ့ မထိုးခဲ့)
ခွေးက ရူးမယ် ဆိုရင် တစ်ပတ်အတွင်း သေတယ် .. ခွေးရူး အကိုက်ခံရတာ ဆိုရင်တော့ လူက အများအားဖြင့် တလ နှစ်လဆို ရောဂါလက္ခဏာ ပြတယ် .. သေတယ် .. ရံဖန်ရံခါ ၂ နှစ်လောက်ကြာမှ ပြတာလဲ ရှိတယ်လို့ ဆိုတော့ .. အဲဒါ ခွေးရူးကိုက်တာ သေချာမှနော် .. စိုးရိမ်လဲ မကြီးပါနဲ့ .. ရိုးရိုးခွေး ကိုက်တာဆိုရင် မရူးပါဘူး
ဘယ်သူမှ မပြောသေးတာကိုပြောဦးမှ :-* ( ဟုတ်ပါဘူး မန်းဦးမှ )
ရွာမှာဆို ဟင်ချိုရွက်လို့ခေါ်တဲ့ ဟင်းချိုချက်စားလို့ရတဲ့
( ဒါကြောင့် ခွေးရူးနဲ့ခွေးကောင်းပြိုင်ကိုက်ရင် ခွေးကောင်းဘဲရူးမယ်ဆိုတာပြောကြတာဖြစ်မယ် ( စကားချပ် )
အဲ့သည်လို့ ခွေးရူးဖြစ်ဖြစ် ခွေးကောင်းဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ခွေးကို အခြားခွေးက အကိုက်ခံရလို့
သိပ်မသင်္ကာရင် ကိုယ့်ခွေးရဲ့နားရွက်အဖျားတွေကို ခုတ်ဖြတ်ကြတယ်
စစ်တပ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ အင်မက်ဂျက်စီ ( လူရှိန်အောင်ဘိုလိုရေးချင်တာ စာလုံးပေါင်းမတတ်လို့ )
အရေးပေါ် ဆေးဝါးတွေထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုခွေးရူးကိုက်ရင်ထိုးပေးဘို့
ရွာမှာနေတုန်းကတော့ လူကြီးတွေ ပြောတာ ကြားဖူးတယ်။ လက်ပံပွင့်ချိန် ခွေးရူးချိန်ဆိုပြီး။ အရမ်းပူလွန်းတဲ့ အချိန် ရူးတယ် ထင်တာပဲ။
အောက်တိုဘာမှာ ရေးဖြစ်တယ်လို့ ရေးထားတဲ့အတွက် မိုးတွင်း ဖြစ် မဖြစ်ကို မေးတာလား ..
တကယ်က ဘယ်ရာသီမဆို ဖြစ်နိုင်ပါတယ် .. အများဆုံးကတော့ ပူအိုက်တဲ့ ရာသီမှာ ဖြစ်ပါတယ် ..
ဒါပေမယ့် တွေ့ဖူးတဲ့ တစ်ယောက်ကတော့ မိုးတွင်းမှာ အကိုက်ခံလိုက်ရပါတယ် ..
လမ်းမှာ ကားပြင်နေတုန်း တင်ပါးကို ၀င်ကိုက်တာ .. အဲဒါကို ဆေးမထိုးဖြစ်တော့ တစ်လအကြာမှာ ဖျားပြီး တစ်ကိုယ်လုံး ယားယံတာ ဖြစ်လာတယ် .. ကုတ်ဖဲ့နေတာ .. နောက်မှ ရေသောက်မရ ဖြစ်တော့မှ ခွေးရူးပြန်မှန်း သိတာ (ထိန်းမရနိုင်အောင် ယားတာ ကုတ်ဖဲ့နေရတာ ဟာ ရောဂါလက္ခဏာ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်)
အဓိကက ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် ဖြစ်တာပါ .. မြို့မှာတော့ ခွေး ကို အဓိကတွေ့လို့ ခွေးရူး လို့ ဆိုကြပေမယ့် ..
အခြားသတ္တ၀ါတွေလဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ် .. လင်းနို့ ကြောင် အစရှိသဖြင့်ပေါ့ .
လင်းနို့ကနေ ခွေး .. လူ စသဖြင့် ကူးတဲ့ နိုင်ငံခြားကား CUJO ဆိုတာ ရှိပါတယ် .. လမ်းဘေးမှာ ၄ ကား တစ်ချပ် DVD မှာ ပါတယ် ..
မြန်မာကား က ခွေးရူးကနေကူးတာ ဒေါက်တာကောင်းမြတ်နှင့် မြသီတာ ဆိုတာ ဇော်လွင် သရုပ်ဆောင်ပါတယ် .. မင်းသမီးတော့ မမှတ်မိတော့ပါ .. ၁၉၇၂-၇၄ လောက်မှာ ထွက်တယ်လို့ ထင်ပါတယ် .. (ခုနှစ် မသေချာပါ)
ဗိုလ်ချုပ်တွေအတွက်တော့ အထူးချန်ထားတဲ့ ဆေးတွေ အများကြီးပါ ..
ခွေးရူးပြန်ကို အခု ထိုးပေးနေတာက ကိုယ်တွင်းက anti-body ထုတ်ဖို့ antigen ထိုးတာ ဖြစ်တယ် ..
တကယ် ခွေးရူးသေချာရင် antibody ထိုးပေးတာက ကုသမှုမှာ ပိုပြီး သေချာပါတယ်